ओलीको प्रश्न, बिग्रीएको कांग्रेसलाई कसरी आयो भोट ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
ओलीको प्रश्न, बिग्रीएको कांग्रेसलाई कसरी आयो भोट ?
काठमाडौं । स्थानिय तहको पुरा परिणाम नआउँदै नेकपा एमालेले केन्द्रीय स्तरबाट नै विजय उत्सव मनाउन सुरु गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको सहभागितामा काभ्रेका विजयउत्सव मनाइएको छ ।
नगर चुनावको इतिहासमै पहिलो पटक बनेपा नगरपालिकामा एमालेले जितेपछि विजय उत्सवमा मनाइएको छ । विजय सभालाई सम्वोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो चरणको स्थानीय चुनावको परिणाम एमालेका लागि सन्तोषजनक मात्रै रहेको बताए । उनले कांग्रेस एमालेको हाराहारीमा आएकोमा आश्चर्य पनि व्यक्ति गरे ।
उनले एमालेका लागि अगाडी आउन अझै कार्यकर्ताले ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने देखाएको बताए । सभालाई सम्बोधन ओलीले भने, ‘बिग्रिसकेको कांग्रेसले किन यत्रो भोट ल्यायो हामीले अझै जनतालाई बुझाउन सकेका रहेनछौं ।’
उनले कुनै सिद्धान्त र बिचारबाट च्यूत भइसकेको कांग्रेसको बारेमा जनतालाई प्रष्ट पार्न बाँकी नै रहेको पनि बताए । नेपाली कांग्रेसको गढ मानिएको काभ्रेको बनेपा नगरपालिकामा एमाले उम्मेदवार विजयी भएपछि विजय जुलुसमा सहभागी हुन एमाले अध्यक्ष केपी ओली बनेपा पुगेका हुन् ।